कबड्डी टिमलाई लाग्यो गीत चोरेकाे आरोप , के भन्छन निर्देशक ?
कबड्डी कबड्डी कबड्डी फिल्मको पहिलो गीत &lsquo;दुबो फुल्यो&rsquo; सार्वजनिक भयो। जसमा एसडी योगीको संगीत छ।यसैबीच उक्त गीत विवादमा परेको छ।आलोकश्रीको संगीत रहेको &lsquo;कैले फोटो सिरानीमा&rsquo; बोलको गीतको संगीत &lsquo;दुबो फुल्यो&rsquo; गीतमा चोरी भ�
शिल्पा सेट्टीले दिइन् याेगसम्बन्धी नयाँ राज
बलिउडकी चर्चित नायिका शिल्पा सेट्टीले चलचित्रमार्फत् आफूलाई योग प्रचार गर्न मन लागेको बताएकी छिन्।शिल्पा पछिल्लो १८ वर्षदेखि योग गरिरहेकी छिन्। उनी योग प्रचारका लागि खटिरहेकी छिन्।उनले निरन्तर फिटनेस भिडियो बनाएर, एप बनाए�
चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को गीत ‘दुबो फुल्यो’ सार्वजनिक
चलचित्र &lsquo;कबड्डी कबड्डी कबड्डी&rsquo;को गीत &lsquo;दुबो फुल्यो&rsquo; सार्वजनिक भएको छ।ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यानलबाट गीत सार्वजनिक भएको हो। यस गीतमा हेमन्त राणा र रितिका श्रेष्ठको आवाज रहेको छ। चलचित्र कबड्डीको सिक्वेलको रुपमा &lsquo;कब�
आफै फिल्म बनाउँदै छन् सलमान खान
बलिउड स्टार सलमान खानले आफ्नै कम्पनीबाट फिल्म बनाउने भएका छन्। उनले आफ्नो कम्पनी एसकेएसबाट &lsquo;म्यारिज हल&rsquo;सँग सम्बन्धित छ। भारतीय संचार माध्यमले जनाएअनुसार फिल्मको निर्देशन रोहित नैय्यरले गर्दै छन्। अहिले फिल्मको कास्टि�
बलिउड नायिका कोएना मित्रालाई जेल सजाय ,अाखिर के गरिन् त उनले ? यस्ताे छ रहस्य ।
&nbsp;बलिउड नायिका कोएना मित्रालाई जेल सजायँ भएको छ । कुनै समय बलिउडमा नेम फेम बनाएकी कोएनालाई चेक बाउन्सको मुद्धामा ६ महिनाको जेल सजायँ भएको हो । कोएनालाई पैसाको समस्या हुँदा मोडल पुनम सेठीबाट २२ लाख ऋण लिएकी थिईन । घटना फेरी नयाँ�
अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षको नतिजा प्रकाशन भएको सन्दर्भमा बलिउड स्टारहरूको शैक्षिक योग्यता पनि हाम्रो चासोको विषय हुन सक्छ।यसबारे आज (शुक्रबार) प्रकाशित साप्ताहिकले उनीहरूको विवरण छापेको छः रणवीर कपुर अहिलेका हटकेक मान�
रिल लाइफमा यसरी फ्लप हुँदैछ प्रियंका र देशराजको जोडी
फिल्म क्षेत्रका हिट जोडी हुन् अभिनेत्री प्रियंका कार्की अनि आयुष्मान देशराज जोशी श्रेष्ठ। तर रिल लाइफ रियलझैँ कहाँ हुन्छ र? रियल लाइफमा सफल यो जोडी रिल लाइफमा भने फ्लप हुन थालेको खबर आजको शुक्रबार साप्ताहिकले छापेको छ। पर्दा�
रजनीकान्तकी छोरीको यो फोटो देखेपछि गाली बर्सियो, फोटो नै हटाउन बाध्य भइन्
&nbsp;भारतको चेन्नई सहर यतिबेला पानी अभावको चपेटामा छ । यस्तो गर्मी मौसममा अभिनेता रजनीकान्तकी छोरीले भने स्विमिङ पुलको एक तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । जुन सामाजिक संजालमा भाइरल नै बनाइएको छ । रजनीकान्तकी छोरी सौन्दर्याले आफ्नो छोर
प्रकाश सपुत भन्छन्ः मैले त शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं...’ गीत सुनेकै थिइनँ
प्रकाश सपुतको &lsquo;गलबन्दी&rsquo; गीत भाइरल भयो। युट्युबमा भ्युजको रेकर्ड राख्दै गर्दा शम्भु राईले आफ्नो पुरानो गीत &lsquo;आऊ नाचौं साथी हो....&rsquo; सँग लय मिलेको आरोप लगाए। विवाद चर्किंदै गएपछि गत बुधबार दुई सर्जकबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौत�
नामकै लागि यत्राे बखेडा , सल्टियो ‘गलबन्दी’ विवाद, शम्भु राईले नाम मात्रै पाउने
काठमाडाैँ/पछिल्लो समयको चर्चित गीत &lsquo;गलबन्दी&rsquo;मा देखिएको विवादमा गायक/सर्जक शम्भु राई र प्रकाश सपुतबीच सहमति भएको छ । सांगीतिक क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा बुधवार भएको छलफलपछि सहमति भएको हो । सहमति अनुसार गलबन्�
करिश्मा मानन्धर जस्तै देखिने फेरी को आयो यति सेक्सी तरकारीवाली
सायदै मानिसले अहिलेसम्म करिश्मा मानन्धरलाई यो अवतारमा देखेका छैनन् । यसैले शीर्षकमा नै करिश्मा मानन्धर खेती किसानीमा व्यस्त भन्यो भने पाठकलाई पत्यार नलाग्ला । यसैले यो प्रसंसनीय अवतार सबै पाठक समक्ष पुर्याउन हामीले करिश्मा
प्रियंका र निकले पार्किग लटमा नै यति गाढा चुम्बन गर्न थालेपछि [तस्वीरसहित]
सर्वाधिक चर्चामा रहेको जोडी निक र प्रियंका लाजले पानी&ndash;पानी भएका छन् । पार्किग लटमा कसैले देख्दैनन् भनेर गरेको गाढा चुम्बनको तस्वीर लिक भएपछि उनीहरुमा आपत आइलागेको हो । केही समय अघि बिवाह बन्धनमा बाधिएकी बलिउड नायिका प्रियं�
केही बर्षअघि सुदुरपश्चिमबाट सारा नेपाली चकित हुने सन्देश आयो । स्कुले बालिका एकाएक पोर्नस्टार बन्छु भन्दै विभिन्न हर्कत देखाउँन थालिन् । त्यो खबर केही क्षणमा नै चैत मासमा खरबारीमा लागेको डढेलो भन्दापनि तिब्र फैलियो । &nbsp; त्य�
टिकटककी चर्चित डान्सर योगिसालाइ यस्ताे अवसर
समाजिक सञ्जाल टिकटकमा सवार्धिक रुचाइएकी डान्सर योगिसा खत्री अब भने चलचित्रमा खेल्ने भएकी छन्। आफ्नो थुप्रै म्युजिक भिडियो तथा टेलिश्रृङखलामा आफ्नो अभिनय एवम नृत्य प्रस्तुत गरिसकेकी उनलाई बाल नायिकाको भुमिकामा रजतपटमा ल्य�
प्रकाशित मितिः असार 2, 2076
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म भारतले अहिले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेको छ  । भारत रिलिज हुनुअगावै सलमानले दबंग&ndash;३ को सुटिङ सुरु गरिसकेका थिए । दबंग&ndash;३ को सुटिङको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । द�
गायिका शकीरामाथि १४.५ मिलियन युरो कर छलीको आरोप
लसएञ्जलस । पपस्टार शकीरा १४.५ मिलियन युरो कर छलीको आरोपमा गत बिहीबार बार्सिलोनस्थित अदालत पुगेकी छिन् । उनीमाथि सन् २०११ देखि २०१४ को बीचमा स्पेनमा बस्दाताका उनी र उनका सल्लाहकारले कर नतिरेको अभियोग लगाइएको छ । कर नतिरको आरोप �
सबैभन्दा धेरै फिल्ममा अभिनय गरेर विश्वरेकर्ड बनाएका ब्रह्मनन्दम फिल्ममा कसरी आए ?
एजेन्सी । फिल्मी दुनियामा केही यस्ता अभिनेताहरु हुन्छन् जसले सानो भूमिकामा नै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल हुन्छन् । सुरुवाती दिनहरुमा सानो भूमिकाबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका कमेडियन ब्रह्मनन्दम आज विश्वभर परिचित छन् । उनको जन्म आन
चर्चित नायिकाकाे नांगाे तस्विर एकाएक लिकभएपछि...
मुम्बई । अभिनेता कमल हसनकी छोरी अक्षरा हसनले आफ्नो निजी तस्विर लिक भएपछि मुम्बाई प्रहरीको साइबर सेलसँग सहयोग मागेकी छिन् । शुरुमा धेरैले तस्विरहरू मोर्फ्ड भएको आशंका गरेका थिए । अक्षरा आफैले ट्वीट गर्दै तस्विरका कारण आफू स्त�
बलिउडमा यतिबेलाका चर्चित जोडी हो आलिया भट्ट र रणबिर कपूरको जोडी । पछिल्लो समयमा बलिउडमा सम्पन्न अवार्ड शोहरुमा आलिया र रणबिर एकअर्काको हात थाम्दै सहभागी भएर सबैको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएका थिए । केही दिनअघि आलिया र �
मनोज गजुरेल अभिनीत चलचित्र ‘सय कडा दस’ माघ १८ गते देशव्यापी रिलिज हुने
इटहरी । मनोज गजुरेलले पहिलो पटक अभिनेताका रूपमा अभिनय गरेको चलचित्र &lsquo;सय कडा दस&rsquo; माघ १८ गते देशव्यापी रिलिज हुने भएको छ । भष्टाचारका कारण प्रेम, समाज र परिवारमा पर्न गएको समस्यालाई चलचित्रले उठान गरेको निर्देशक रामशरण पाठकल�